ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: စေတနာ. ၀ါသနာ
Posted by ကြည်ကြည် at 11:16 PM
တို့က အလှပန်းပင်ထက် စားပင်စိုက်ရတာဝါသနာပါတယ်
နံနံပင် ကြက်သွန်မြိတ် ပူစီနံ ငရုတ်သီး စသဖြင့် မီးဖိုနားမှာစိုက်ချင်တယ်
မိုးယံ January 29, 2011 at 12:59 AM
စားပင်စိုက်တာချင်း ၀ါသနာ တူတယ် အစ်မရေ...
ဒါနဲ့ 5.11.2015 နေ့လည် 1 နာရီခွဲ မှာ ကောင်မလေးချောချောလေးနဲ့ ထမင်းလာစားမယ်.. နှစ်ပွဲစာ လုပ်ထားပေးနော်... ဘိုကင်လဲ ကြိုလုပ်ထားတယ်.. ဆိုင်လိပ်စာလဲပေးဦး
Kay January 29, 2011 at 1:20 AM
can I makeabooking at your coming home restaurant? :)
rose of sharon January 29, 2011 at 1:29 AM
စိုက်ထားတဲ့ အပင်လေးတွေကို သဘောကျတယ် :)
ကောင်းတယ်။ မြန်မာပြည်မှာသာ အဲ့လိုလေးဖွင့်ရင် ရောင်းလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စေတနာကောင်းပါတယ်။ အိုင်ဒီယာလည်းကောင်းတယ်။ အပင်စိုက်ခြင်းကလည်း ပညာတမျိုးပါပဲ။
အပြုံးပန်း January 29, 2011 at 4:39 AM
ကိုယ်က စုံတွဲအနည်းငယ်အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ အုပ်စုလိုက်အတွက်၊
ဂျပန်က အဲဒီဆိုင်လေးကို စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 29, 2011 at 7:54 AM
ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီး ချက်ရောင်းတာမျိုး သဘောကျတယ်.. အဲဒီအိုင်ဒီယာဆို ရန်ကုန်မှာ သေချာပေါက်ဖြစ်ထွန်းတယ် တကယ်..
ဘယ်သူမှ မလုပ်သေးတဲ့ စိတ်ကူးလေးဘဲ
ပူစီနံပင်လေးရော နံနံရော ချစ်စရာလေး စိမ်းစိုနေတာဘဲ။ အပင်စိမ်းစိမ်းတွေ သဘောကျတယ်..
မောင်လေး January 30, 2011 at 3:10 AM
ဘိုကင်လုပ်ထားမယ်နော်....၂၀၁၅ခု ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့အတွက်.....:P